War saxaafadeed – Xukuumadda KMG iyo Ahlu-Sunnah wax badan baa ka dhexeeya. – Radio Daljir
Seteembar 26, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Sept 26 – Xukuumadda Federaalka Ku-Meel-Gaarka ah (XFKMG) waxay aaminsan tahay in Ahlu-Sunnah ay muhiim u tahay geeddiga nabadda, loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo arrimaha dhowrka ah ee na wada horyaalla. XFKMG iyo Ahlu-Sunna wada-jirkooda iyo wada-shaqeyntoodaba waa kuwo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed, dowladda, Ahlu-Sunna iyo caalamkaba. Si maleeshiyada Al-Shabaab iyo Xisbul-Islam oo dhib fara badan ku haya shacabka Soomaaliyeed looga hortago waxaa muhiim ah in hal meel looga soo wada jeesto oo laga wada shaqeeyo sidii dalkan loogu soo celisa amniga, kala-danbeynta iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed.
Sii-hayaha Ra’iisul-Wasaaraha XFKMG ah Mudane Abdiwahid Elmi Gonjex ayaa yiri: “Dowladda iyo Ahlu-Sunna waxaa ka dhaxeeya arrimo badan oo ay ka mid yihiin soo-celinta sharafta shacabka Soomaaliyeed, la-dagaallanka kooxaha argagaxa ku haya shacabka Soomaaliyeed, sidii loo soo celin lahaa amniga, kala danbeynta iyo dowladnimada, sidii calanka sharafta leh loo badbaadin lahaa iyo sidii shacabka Soomaaliyeed looga saari lahaa argagaxa, gaajada, barakaca, isla markaana loo gaarsiin lahaa gar-gaarka bani’aadanimo.?
?Waxaan sidoo kale wadaagnaa sidii looga hortagi lahaa fahamka diinta ee khaldan ee ay kooxahan keeneen, isla markaana aan u faafin lahayn fahamka saxda ah ee Islaamka?.
Sidaas daraadeed, waa in XFKMG iyo Ahlu-Sunna ay ka wada shaqeeyaan sidii loo sii horumarin lahaa xiriirka, wada-shaqeynta iyadoo laga duulayo danta guud ee ummadda. Waxaa xaqiiqo ah in XFKMG ay billowday fulinta ballamadii horay loola galay Ahlu-Sunna, hase yeeshee ay dhiman yihiin dhameystirka barnaamijkaas, caqabado amni iyo dhaqaale ee haysta TFG awgeed. Madaxda Qaranka dhammaantood waxaa ka go’an sidii loo sii wadi lahaa dib-u-heshiisiinta iyo wada-shaqeynta Ahlu-Sunna iyo dhammaan Somalida daneyneysa nabadda.
Wasiirka warfaafinta Puntland oo kulan la qaatay suxufiyiinta magaalada Galkacyo.